सेरोफेरो : September 2015
लिफ्ट दिन खोज्दा
आज बिहान घरबाट अफिस निस्कँदै थिएँ । बिजोर नम्बरको स्कुटर लिएर शान्ति नगर अघि पुगेँ । एक भाइलाई म लाजिम्पाट जाँदैछु जाने हो भनेर सोधेँ ।
"दाई म त कल‌ंकी जाने हो" उनले भने ।
"माइतीघर पुर्याइदिन्छु नी त" मेरो प्रस्ताव सुनेपछि उनले हाँस्दै भने, "सोझै कलंकी जाने गाडी कुर्छु दाई धन्यवाद ।"
लौ त भन्दै म सरासर अघि गएँ । वानेश्वर चोकमा धेरै मानिस गाडी कुरिरहेका थिए । हुलमै सोधेँ, "कोहि रत्नपार्क जानुहुन्छ ?" एक बहिनी धेरै बेर देखि गाडी कुरेको तर नपाइएको भन्दै दौडदै आईन । महांकाल नजिक एक कार्यलमा जाँदै गरेकी मोरङ कि ति बहिनीलाई लिफ्ट दिन पाउँदा खुशी लाग्यो । भोली त जोर दिन आफू पनि फुटपाथमा हिड्नु नै छ ।
भवसागर, ११ असोज २०७२
संविधान सभा भवन भित्र संविधान जारी हुँदै गर्दा बाहिर जे देखियो
संविधान सभाको घोषणा सभाहल भित्र हुँदै गर्दा भवन बाहिर भने धेरै मानिसहरूको उत्साह देख्न सकिन्थ्यो । यो एेतिहासिक क्षणको सांक्षी बस्न आएका केही बेखुशी पनि देखिएका थिए । हेरौं केही तस्बिरहरु ।
Moments outside of Constitution Assembly Hall, while Nepal was promulgating Constitution 2015.
र यो भिडियो झलक पनि...
Photos: Bhabasagar Ghimire
को हो नेपाली ?
एरपोर्ट बिराटनगर । चेक इन काउन्टरमा भिड थियो । लाइन केही लामो । महिला र पुरुषको दुई फरक लाइन । पुरुषको लाइनमा म अघि एक कालो वर्णका मोटा व्यक्ति थिए । महिलाको लाइन छोटो थियो । एक राई लिम्बु जस्तो देखिने महिला हतार हतार आइन । काउन्टरमा सामान जोख्न सघाउने कर्मचारीले तिनको झोला जोख्न सघाए ।
‘बाटो बन्द थियो, हैरान भइयो,’ उनले अंग्रेजी लवज मिसाएर अफ्ठ्यारो भएपनि नेपालीमै भनिन् । ‘हो त गाह्रो भो है ? दार्जलिङतिर हो घर ?’ कर्मचारीले सोधे । ‘हैन म त यहि धरानको हो, युके फर्कन लागेको’ उनले फेरि उस्तै लवजमा भनिन् ।
त्यसै बीचमा मेरो अघिल्तिरको मोटा व्यक्ति लाइनमा सोझो बस्न असहज भएपछि केही बाहिर निस्किए । तत्कालै कर्मचारीले कडा तरिकाले भने, ‘आप लाइन मे सिधा बेठिए ।’ यो सुनेर उनी झनै असहज भए । अन्त्यमा उनले नम्र भएर जवाफ फर्काए, ‘अफ्ठ्यारो भएर हो, म लाइन मै छु ।’